अफ्रिकी देशहरूमा रहस्यमय र रोचक छन्
एकदम ठूलो भन्दा ठूलो महाद्वीप, दोस्रो यूरेशिया पछि, अफ्रीका मानिन्छ। यो पूर्वी गोलार्द्ध मा स्थित र सारा पृथ्वी भूमि को पाँचौ भाग छ। सबै पक्ष पानी द्वारा धोए महाद्वीप मा: पश्चिम मा - अटलांटिक महासागर, पूर्व मा - लाल समुद्र र भारतीय महासागर, उत्तरी मा - भूमध्य सागर र स्वेज नहर यसलाई एशिया बाट अलग। यो मानिसहरूका र कुल, संस्कृति र विश्वास को एक विशाल संख्या छ।
अफ्रिकी देशहरूमा, जो पचास भन्दा बढी साना र ठूलो हालै भाग थिए सम्म, यो महादेशमा को क्षेत्र मा, स्थित छ युरोपेली देशहरूमा, आफ्नो colonies। र केवल को 60-एँ संग अफ्रीकी देशहरूमा, कुल र तिनीहरूलाई बस्ने मानिसहरूका तिनीहरूले आफ्नै राज्य व्यवस्थापन गर्न थाले। तर servile वर्ष बर्बाद थिएनन्। विदेशी देशहरूमा पनि मानिसहरूले तिनीहरूको colonies को क्षेत्रहरूमा को प्रशिक्षण र विकास मा चासो छैन थिए, तिनीहरू अझै पनि ठूलो प्रत्यक्ष, यो महादेशमा को राष्ट्रहरूले uncoupling प्रत्येक अन्य विरुद्ध लडाई जबरजस्ती, त्यसैले सबैतिर थियो गरिबी, निरक्षरता, र केही अमेरिका को सीमाना दुई warring शिविरहरूमा राष्ट्र विभाजित। अफ्रिकी देशहरूमा अझै पनि कारण योग्य विशेषज्ञहरु को कमी गर्न विकास मा lingered। अफ्रीका मा, नजिकै बस्ने धेरै जाति फरक भाषाहरू बोल्न र विभिन्न धर्म छ। सेतो जनसंख्या Afro hampered विकास र प्राविधिक प्रगति को असहिष्णु मनोवृत्ति। धेरै अफ्रिकी देशहरूमा अझै पनि यस्तो सोमालिया, सुडान, रवान्डा रूपमा, यो समस्या संग संघर्ष गर्दै छन्।
तर दक्षिण अफ्रिका, र, कालो, को राष्ट्रपति भए जब 90 को दशक, मा नेल्सन मण्डेला, लोकतांत्रिक निर्वाचित, सबै अफ्रिकी देशहरूमा "प्रकाश टनेल को अन्त मा।" देखे
अहिलेसम्म यसको आफ्नै राष्ट्रिय संस्कृति, परम्परा, उपनिवेशवाद कारण ठूलो परिवर्तन भइरहेको छ। अफ्रिकी देशहरूमा मा विशेष प्रभाव अरब र यूरोप थियो। तदनुसार, मिश्र, को Maghreb र अफ्रिकी महादेशमा उत्तरी भाग मा अन्य देशहरूमा थप अरब संस्कृति संग हुन मानिन्छ, ले। तिनीहरूले पनि, यो अफ्रिकी देशमा सामेल मडागास्कर, जन्जिबार र माउरिटिअस को पश्चिम तट मा स्थित।
महाद्वीप बाँकी मा युरोप प्रभाव अझ साधारण छ। यसबाहेक, यस्तो अफ्रिकी देश जस्तै दक्षिण अफ्रिका, ब्रिटिश विकास निर्देशन गरे। यसलाई चाँडै नै नामिबिया द्वारा सामेल थियो।
इथोपिया संग - रूस लामो कूटनीतिक अझै पनि क्याथरीन द्वितीय अन्तर्गत तिनीहरूले मोरक्को संग र 19 औं शताब्दीको अन्त्यमा स्थापित गरिएको छ, अफ्रीका संग सम्बन्ध थियो।
अफ्रीका जंगली वनस्पति र अनन्त मरुभूमि संयोजन, आफ्नो शानदार प्रकृति मा समृद्ध छ। साथै, महादेशमा बसाबास गर्नु जो मान्छे, उप-सहारा अफ्रिकाका Sunni इस्लाम को उत्तर मा अभ्यास - ख्रीष्टियन, इस्लाम र आदिवासी धर्म, र दक्षिण मा - मसीहीधर्म, क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट र यहूदी।
अफ्रीका मा पहिलो सभ्यताहरू को अद्वितीय ऐतिहासिक स्मारक फरक देशका धेरै पर्यटक आकर्षित, त्यसैले यो व्यवसाय को प्रकारको किनभने धेरै ठाउँमा छिमेकी देशहरूमा भन्दा बढी, बाटो मा खडा त्यहाँ जीवित वनस्पति को धेरै बाक्लो thickets र जनावर हुनत, एकदम उन्नत पहिले देखि नै छ।
ग्राफ कागज - मुक्त रचनात्मकता को लागि एक उपकरण
व्यावहारिक प्रशिक्षण कार चालक
विद्यार्थी सम्झौता: अवधारणा र मुख्य बुँदाहरू
एक समदिबाहु त्रिकोण को क्षेत्र कसरी पाउन
गणितीय विश्लेषण आधारमा। को व्युत्पन्न कसरी पाउन?
उचाइ मा काम: नयाँ नियम। उचाइ मा काम: श्रम सुरक्षा नियमहरु
कुल यूएस जनसंख्या। यूएस जनसंख्या संख्या
घरमा Meringue नुस्खा: मनपर्ने व्यवहार को प्राकृतिक स्वाद
सुकेको ब्रीम: तयारी र भण्डारण
सूर्य वरिपरि पृथ्वीको वेग। सूर्य वरिपरि पृथ्वीको क्रान्तिको फ्रिक्वेन्सी के हो?
चाँडै र बस - अन्डा व्यञ्जन